Naoty avy amin’ny foaran’ny boky ao Jakarta · Global Voices teny Malagasy
Naoty avy amin'ny foaran'ny boky ao Jakarta
Voadika ny 04 Desambra 2018 6:08 GMT
Boky maro no miranty ao amin'ny foaran'ny boky iraisampirenena ao Indonezia 2018: saripikan'i Arpan Rachman
Zavabita lehibe no hita tao amin'ny Foaran'ny boky iraisampirenena 2018 notontosaina tao amin'ny Foibem-pivorian'i Jakarta tamin'ny 12 ka hatramin'ny 16 Septambra 2018. Navela hiditra maimaimpoana hisitraka ireo ranty 100 nohazonin'ny komitin'ny lanonana izay nandraisan'ny firenena miisa 17 anjara ny mpitsidika rehetra.
Tranombarotra lehibe maro no nandranty ny vokatra nahitana fihenam-bidy hatramin'ny 80 isanjato. Famoahana maro no nampiseho ireo boky mampalaza azy, nanomboka tamin'ireo vondrona ao amin'ny firenena toa ny Gadjah Mada University Press, Indonesian Torch Foundation (YOI), Kompas Publishers, Gramedia ary Mizan ka hatramin'ireo marika iraisampirenena toy ny Harvard Business Review sy ny Penguin Random House.
Ankoatra izany, nisy ny fifaninanan'ny sekoly, seminera, resaka an-tsehatra, fifaninana mandihy ataon'ny mpianatry ny garabola, famoahana boky, fihaonana sy fiarahabana mpanoratra, resadresaka, fitetezana literera, fifanakalozan-tsoratra ary fetiben'ny vondrom-piarahamonina literera nandritra izany fotoana izany. Nandritra ny efatra andro nametrahana ny IIBF 2018, dia hita ho betsaka olona tokoa amin'ireo zavatra maro atao ny toerana.
Milaza ny lehilahy iray antsoina ho Andi Zulkarnain:
I have prepared enough funds to buy books here. Moreover, many books that I am looking for are very cheap.
Efa niomana aho hividianako boky teto. Ankoatra izany, mora dia mora ireo boky notadiaviko.
Boky tsy latsaky ny 10 kilao tao anaty harona plastika lehibe no nentiny nody. Nasiaka tamin'ireo mpitsidika hafa miisa anjatony isan'andro ity lehilahy avy any Makassar ity.
Ny mpanoratra maka sary ao anatin'ireo mpitsidika ny IIBF 2018: sary avy amin'i Arpan Rachman
Mampaneso sy vahoaka betsaka
Toy ny mampaneso ihany koa ny mahita ny fahalianan'ny mpitsidika fatratra ny IIBF 2018. Indonezia no firenena alohan'ny gisitra eto ambonin'ny tany amin'ny tsi-fahaiza-manoratra sy mamaky teny amin'ireo firenena miisa 61 azo refesina, ka i Botswana irery no resiny, araka ny fikarohana vaovao notanterahan'ny Oniversitem-Panjakana Central Connecticut any New Britain, Connecticut, Etazonia. Fakafakain'ny fanadihadiana ny toetra ara-pahaiza-mamaky teny ao amin'ny firenena miisa 200, sainfy firenena miisa 61 ihany no voasoratra satria tsy manana antontanisa mazava ny ambin'ny firenena voalaza.
Efa zato taona izay no nanombohana nanonta boky amin'ny isa maro tao Indonezia. Naorin'ny governemanta holandey any amin'ny faritra India atsinanana (indonezia tamin'izany fotoana izany ihany) tamin'ny 14 septambra 1908 ny Balai Pustaka, orinasam-panontana sy famoahana tantanin'ny fanjakana, nantsoina hoe Commissie voor de Inlansche School en Volkslectuur (Holandey: “Vaomieran'ny famakiam-boky ho an'ny vahoaka”), nisokatra tamin'ny 17 septambra 2017 ny Kantoor voor de Volkslectuur na fantatra kokoa amin'ny anarana “Balai Poestaka”. Talohan'ny nahaleovan'ny fanjakana indoneziana tena dia nahatsangana seha-bahoaka famakiam-boky manodidina ny 2800 ny Balai Pustaka.
Ny tanjona tamin'ny fametrahana ny Balai Pustaka dia ny hampivelarana ny tenim-paritra lehibe indrindra tany India Atsinanana Holandey. Tsy iza ireo teny ireo fa ny Javaney, Sondaney, Malay ary ny Madorey. Mandraka androany, lohatenim-boky manodidina ny 350 isa-taona no avoakan'ny Balai Pustaka izay ahitana rakibolana, boky fakan-kevitra, talenta, literatiora, sosialy, politika, fivavahana, toekarena ary torohevitra.
Manana dikany roa ny boky na “buku” — araka ny fototeny indoneziana –. voalohany ny dikany dia hoe singa-taratasy maro misy dikany, voasoratra na tsia; boky. Faharoa, toeram-pihaonan'ny [faritra mafy] singa roa (ratsantanana, vanin-taolana, tonom-pary, hihinify); ny teny mandahatra zavatra amin'ny endrika baolina kely (tahaka ny sira, siramamy, [menaka?], lasopy); endrika (fisaka): ohatra amin'ny fehezanteny : ‘manana boky telo ny paraky’ izany hoe telozoro.
Misy ireo ohabolana miavaka mampanankarena ny teny indoneizna tahaka ireto manaraka ireto:
Mampihaona ny ampahany amin'ny boky, izay midika hoe: araka ny zo; efa nampihaonina ny fampihaonana (lehilahy iray amin'ny vehivavy iray).
Mitady [tonony: boky] amin'ny boky: mitady entana, miharatsy [ny fahasalamana].
Manambatra kiho (manandrina boky dimy): mifanao totohondry; miady.
Mampitovy tenim-boky: mifampivazavaza; mifandresy lahatra.
Nifantina ny kiho, nifantina tao amin'ny boky: nahazo ny ratsy satria manindrona loatra.
Tahaka ny boky papangohazo: vaovao mampiseho ny fiamboniany raha ilaina.
Ampahany mahatalanjona ao amin'ny boky: very hevitra.
Nefa amin'ny teny anglisy dia vitsivitsy kokoa ny teny anglisy, ka anatin'izany ilay miteny hoe “aza mitsara ny boky amin'ny fonony” izay midika hoe “aza mitsara mihitsy ny olona iray araka ny ahitana azy na ny boky amin'ny fomba namonosana azy; ny ao anatiny ireo pejy rovidrovitra ireo, betsaka ny mila fantarina ao anatiny” araka ny lazain'ny mpanoratra ny Stephen Cosgrove.
4 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana